Meghan Markle naChris Eugénie vakakurudzira kuti "TEAM UP" nokuda kwechirongwa cherudo - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Meghan Markle naChristian Eugenie vakakurudzira kuti "TEAM UP" ive chirongwa chekuda
Meghan Markle naChristian Eugenie vakakurudzira kuti "TEAM UP" ive chirongwa chekuda
Meghan, Duchess of Sussex uye Princess Eugenie vose vanozivikanwa nokuda kwekubatanidzwa kwavo mune rudo uye kubudirira kwavo kune vakadzi vari kushaiwa. Uye ikozvino, ivo vakakokwa nevarimi vamambo kuti "vagoverane" pane rimwe basa raizoona vaviri vanobatana vachibatana. Princess Eugenie yakagadzirirwa mapurisa mberi kwevhiki ino, yakatsaurirwa kujekesa dambudziko rinotyisa reuranda hwemazuva ano. Apo paakabudisa mufananidzo pamusoro peku Instagram achitsanangura vanhu vaipinda mutambo uyu, kusanganisira Julia de Boinville, mubatsiri wezvitsigiro zveEugenie, musangano wekurwisana neuranda, mambo wekumambo akakokwa kuti ashande pamwe neDuchess neSussex.
Anofarira mambo wepachigaro akanyora, "Iwe sangano pamwe neMeghan uye ita kuti kurota uku kuzadzike."
Mharidzo iyi yakakonzera kukakavara pakati pevatariri vamambo, vamwe vachigamuchira noushamwari pfungwa uye vamwe vachiti Meghan "haisi mhinduro".
An Instagram Instagram akanyora kuti: "Meghan haisi mhinduro yezvose.
"Akanyora tsamba. Ita izvozvo pakuenzanisa neGrta Thunburg (Extinction Rebellion) uyo, pamakore 16, akasarudzwa nokuda kweNobel Peace Prize, maitiro makuru asina simba zvokuti nyika inosimudzira kuvandudza hupenyu, kwete chete yevakadzi, asi mhuka dzose dziri panyika.
VERENGA ZVAKAWANDA: Meghan Markle ndiye mutambo: Princess Meghan anotsigirwa neChipiri chekuberekwa kwaBborn Archie
Meghan Markle naChristian Eugénie vave vakakokwa kuti vabatane pane chirongwa chekuda (Mufananidzo: GETTY)
"Mwana ari kunyora tsamba yakakura, asi iwe haugoni kuverenga zita iroro kana iwe wava nemakore anenge 40."
Princess Eugenie, uyo akatanga chirongwa chake chekurwisana muuranda mu 2013, haana kupindura kushevedzwa kwevhiri, asi kunyange dai aida kubatanidzwa mubasa rakagoverana naDuchess weSussex, anofanira kumirira vhiki shomanana.  Meghan iye zvino ari pazororo rekuberekwa pashure pokunge aberekera mwanakomana wake, Archie Harrison Mountbatten-Windsor iyo 6 inogona.
Zvisinei, Duchess of Sussex angakurumidza kudzokera kubasa. Izvo zvinoreva kuti zvakatora vhiki matanhatu mushure mokuberekwa kwechecheche.
The Instagram post ya Princess Eugenie (Image: INSTAGRAM)
Meghan Markle ndiye anonzi akazikadzi (Mufananidzo: GETTY)
Vakataurira Zuva: "Meghan akajekesa kuti anoda kudzokera kubasa nekukurumidza.
"Ane simba rakawanda, akatsunga zvakasimba uye anoda kushanda nesimba sezvinobvira. zvinogoneka nemabasa ake erudo.
"Hapana chakanyorwa mubhuku rake rekare, nokuti iye anoda kumirira kuona zvaanonzwa mushure mekunge ane mwana.
"Ane penzura mupeni mumwedzi mitatu, asi iye angangodzokera kuhupenyu hwevanhu mumavhiki masere - zuva rekuzvarwa kwemazuva ano mambokadzi T padenga remuvara, munaJune.
Meghan naHarry vari mumusangano pamwe chete naGavhuna mukuru weWexNUMX, rudo rukuru mukubatsira vakadzi (Mufananidzo: GETTY)
"MuUnited States, amai veAmerica vane mwedzi mitatu yekuberekwa: havawanzogamuchira vakadzi vane makore matanhatu kana gumi nembiri muUnited Kingdom.
"Saka ndizvo zvakanakira Meghan. "
Iyo Duchess yeSussex inotsigira zvakasimba kurudzi uye yevakadzi kuenzana uye yakatsigirwa nedzimwe mimwe mishandirapamwe mumakore.
Meghan anoshandawo muUnited Nations kuti aite zvematongerwe enyika uye utungamiri. uye mu2015, akapa hurukuro kune munyori mukuru weUN, Ban Ki Moon.
Kim Kardashian's statement inoshamisa kuna Kanye West vasati vaberekwa ...
PHOTO. Carla Bruni: Mwanasikana wake Giulia madzimambo wePasika yekuvhima mazai
Bakary Sambe: "Jihadists inotyisa kupesana pakati pevanhu" - JeuneAfrique.com
MAZANO: 24 PRINTIVE MAZANO OKUTI MAFUMA AKE ACHIDZIDZWA
Esp: The XXL kutsvaga kweGareth Bale muZidane neMadrid - FOOT 01